Deeqaha Dhammaadka Sanadka ee Hay'adaha aan faa'iido doonka ahayn - Fursadaha Dhismaha Sadaqada ee 2019
Ku Samaynta Deeqaha Dhammaadka Sannadlaha ee Sadaqada leh Cunnooyinka Gawaarida
Inbadan waxay ogaadeen in dhamaadka sanadka ay tahay waqti munaasib ah oo lagu muujiyo mahadcelin iyadoo lagu deeqayo sadaqo. Hadday ku timid ruuxa ciidaha soo dhowaanaya, dhiirrigelinta canshuuraha markii aan ku soo dhowaanno dhammaadka sanadka, ama isku dhafka caafimaadka leh ee labadaba, waa inaad ka fiirsataa inaad ku tabarucdo metals metals on wheels.
Markaad ugu deeqdo Metro Meals on Wheels, waxaad hubineysaa in waayeelka Minneapolis / St. Meelaha Paul waxay helaan nafaqada ay ugu baahan yihiin inay si madax-bannaan ugu noolaadaan. Cunto kastaa waxay ku kacdaa qiyaastii $6 waana iyada oo loo marayo tabarucaadka dadka adiga oo kale ah inaan awoodno inaan u keeno cunto caafimaad leh iyo isdhexgal bulsheed dadka waayeelka ah.
Sida Loo Sameeyo Tabarucaadkaaga Dhammaadka Sanadkaaga
Waxaa jira dhowr qaab oo loogu deeqo Metro Meals on Wheels oo ay ka mid yihiin:
Ku Bixinta Hal Mar: Ku tabarucaad hal mar oo xaddi ah oo aad dooratay.
Joogtaynta Deeqaha (Bille): Deeq bille ah oo lagu sameeyo qadarka aad dooratay.
Wax Siinta Dhaxalka: Dardaarankaaga ama dhismahaaga dhexdiisa ayaa dhigay dardaaran loogu talagalay samafal ama deeq-bixiye ka-faa'iideyste.
Deeqaha Iswaafajinta Goobta Shaqada: Loo shaqeeyayaal badan ayaa bixiya hadiyado iswaafajiya markaa hubi inaad ka hubiso taada si aad u ogaato inay ku habboonaan doonaan tabarucaada.
Ku deeq deeq: Waxaad ugu deeqi kartaa koontadayada dallaalnimada.
Ku deeqo Boostada ama TelefoonkaKu deeqaha boostada waa jeeg halka tabarucaadka taleefankana laguugu soo diro kaarka deynta ama Wareejinta Lacagta Elektaroonigga ah (EFT).
Qaybinta Hay'adaha Samafalka ee IRS
IRS Qaybinta sadaqooyinka u qalma (QCD) waa qeybinta laga sameeyay Akoon Shakhsiyeed Hawlgab (IRA) ama 401 (k) si toos ah sadaqo xaq u leh. Milkiilayaasha IRA ama 401 (k) oo ugu yaraan ah 70 ½ waxay ku biirin karaan qaar ka mid ah dhammaan IRA sadaqadooda. Tani waxay noqon kartaa faa'iido weyn oo canshuur ah haddii aad isku dayeyso inaad ku dhexjirto xadka dakhliga qaarkood. Haddii aad ka weyn tahay 70, weli waa lagugu qasbi doonaa inaad qaadato Qaybinta Ugu Yar ee Loo Baahan Yahay (RMD) IRA-gaaga ama 401-kaaga (k). Haddii aad iska indhatirto RMD-yadaada waxaad qaadan doontaa canshuur dhaaf 50%. IRS waxay qiraysaa qaybinta sadaqada ee u qalma ee IRA ama 401 (k) inay tahay cashuur dhimis, si aad ugu sii nagaato heerkaaga dakhliga oo aanad wax lacag ah kaaga lumin.
Si tan loo dhammeeyo, tixgeli inaad ugu deeqdo RMD-kaaga sadaqo sida Metro Meals on Wheels halkaasoo aad ka sameyn karto qaybinta samafalka ee IRS aqoon u leh. Waxaan nahay 501 (c) 3 urur cashuur dhaaf, taas oo macnaheedu yahay deeqdaada oo dhan cashuur dhimis. Tani waxay kaa caawineysaa inaad ku ilaaliso dakhligaaga guud ee sanadlaha ah iyo dakhligaaga la cashuurayo inta u dhexeysa intaad rabto iyo sidoo kale inaad siiso waayeelka deegaanka cunno caafimaad leh!
Deeq-bixiyeyaasha lagula taliyay in laga jaro Cashuurta
Sanduuqa Deeqaha La Taliyay (DAF) waa koonto maalgashi sadaqo ah oo u oggolaanaysa deeq-bixiyeyaasha inay ku darsadaan sadaqo, helaan cashuur-dhimis deg-deg ah ka dibna ku taliya deeqaha sanduuqa muddo ka dib. Deeq-bixiyeyaashu waxay ku darsan karaan sanduuqa had iyo jeer sida ay jecel yihiin, ka dibna waxay kugula taliyaan deeqaha sadaqadooda markasta oo ay macno u sameyso iyaga.
Hantida aan ka ahayn lacagta caddaanka ah ee guud ahaan laga aqbalo xisaabaadyadan maalgashiga sadaqada waxaa ka mid ah:
Lacag u dhiganta
Ammaanada bulshada laga ganacsado
Qaar cayiman, xakamaysan, ama keyd-qufulka
Saamiyada sanduuqa wadaagga ah
Lacagta-yar iyo lacagaha kale ee loo yaqaan 'crypto-currencies'
Sinnaanta gaarka loo leeyahay iyo danaha sanduuqa xayndaabka
Hanti ma guurto
Metro Meals on Wheels waxay u qalabeysan tahay inay ka hesho tabaruca deeq-bixiyeyaashan la taliyay ka-jarista canshuuraha. Si aad wax uga weydiiso sida loo dejiyo sanduuqaaga nala soo xiriir maanta!
Samee Sanadkaaga Dhammaadka Ugu Deeqaha Hadda!
Iyada oo sanadka dhamaadkiisa geeska, wali lama daahin in la sameeyo tabarucaad sadaqo ah. Naga fiirso Metro Meals on Wheels, halkaas oo laga helo tabarucaad sidaada oo kale ah, waxaan awoodnay inaan bixinno nafaqeyn iyo caawimaad waayeelka deegaanka 40-kii sano ee la soo dhaafay. Waxaan kuu soo bandhigeynaa siyaabo kala duwan oo aad si fudud ugu tabaruci karto sadaqadaada. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, hubi kaayaga Su'aalaha bogga ama nala soo xiriir toos ah waana ku faraxsanaan lahayn inaan ku caawinno.